Latest Society news from Nepal and World
फाटेको मन सिलाउन सडक नाटक
काभ्रेपलान्चोक, वैशाख ११ । विवादबिनाको समाज कल्पना गर्न सकिन्छ तर सम्भब भने छैन । गाउँघरमा देखिएका सानातिना विवादहरु समयमा नै समाधान नहुँदा समाजमा हत्या आत्माहत्याको घटनाहरु भइरहेका छन् ।
पाथीभरा डाँडामा पम्पिङ प्रणालीबाट खानेपानी
तेह्रथुम, वैशाख ११ । गुराँस पर्यटनले प्रदेश नं १ मै चर्चित पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गएको तीनजुरे मिल्के जलजले (टिएमजे) क्षेत्रमा पर्ने लालीगुराँस नगरपालिका–१ स्थित पाथीभरा देवीको मन्दिर परिसरमा खानेपानी पु¥याइएको छ ।
नवराज सिलवालद्वारा सर्वोच्चमा फेरि रिट दायर
काठमाडौं, वैशाख ११ । डिआईजी नवराज सिलवालले फेरि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । सोमबार नेपाल प्रहरीले आफूलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षिकरण रिट दायर गरेका हुन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनलाई हराउँदै पत्रकार महासंघ काठमाडौंमा शन्तराम विजयी
काठमाडौं, वैशाख ११ । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौंको अध्यक्षमा शन्तराज बिंडारी निर्वाचित भएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धन दल निकटका पत्रकार उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै बिंडारी निर्वाचित भएका हुन ।
बैंकबाट करोडौं कुम्ल्याएर फरार रविचन्द्र खनालको खुलासाः पैसा खाने अरू, पीडा मलाईमात्रै किन ?
बैंक, वित्तीय सस्था तथा सर्वसाधारणबाट करोडौं रकम कुम्ल्याएर फरार भएका भनिएका रविचन्द्र खनालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत खुलापत्र लेखेका छन् । खुलापत्र लेख्दै उनले रकम दुरुपयोग गरेको स्वीकार्दै अनियमिततामा संलग्नहरुको फेररिस्त सार्वजनिक गरेका छन् ।
के बाहुन हुनुमा गर्व गर्न पाइँदैन र ?
अहिले जबरजस्त जातीय मुद्दालाई पेचिलो बनाइँदैछ । पहिचानका नाममा एकले अर्को जातीको अस्तित्वलाई स्वीकार्न कठिन भएजस्तो देखिएको छ ।
नीता र गंगालाई छोएन निर्वाचनले, बिहान बेलुकाको छाक टार्नकै चिन्ता
दाङ, वैशाख १० । बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दलहरु उम्मेदवार छनौटमा ब्यस्त छन् । निर्वाचन कार्यकर्ताहरु निर्वाचनमा मत कसरी खसाल्ने भनेर गाउँ÷गाउँमा शिक्षा दिइरहेका छन् । तर, किसान तथा श्रमिकहरुलाई यस्ता केही कुराले छोएको छैन ।
नगर र गाउँपालिकाको प्रमुखमा दलितको चर्चा नै भएन
जुम्ला, ९ वैशाख । स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब २१ दिनमात्र बाँकी हुँदा पनि जुम्लामा कुनैपनि पार्टीबाट प्रमुख पदका लागि दलितको नाम चर्चामा आउन सकेको छैन ।
भक्तपुरमा साझालाई ‘नो इण्ट्रि’, किन दिइएन ‘रुट परमिट’ ?
काठमाडौँ, वैशाख ८ । साझा यातायातले भक्तपुरमा ‘रुट परमिट’ माग गरेको एक महिना बित्दा पनि यातायात व्यवस्था विभाग वाग्मती अञ्चल कार्यालयले अनुमति दिएको छैन ।
काठमाडौँ, बैशाख ८। साझा यातायातले भक्तपुरमा ‘रुट परमिट’ माग गरेको एक महिना बित्दा पनि यातायात व्यवस्था विभाग वाग्मती अञ्चल कार्यालयले अनुमति दिएको छैन ।